Vatsva Vanosvika Fashoni Inodziya Nguva Yechando Yakasarudzika Yechokwadi Leather Loafers Moccasins Bhutsu Kune Vakadzi - Goodao Technology Co, Ltd.
Yakasarudzika Vakadzi Cowsuede Clog Slipper Yakakwira Hunhu Com ...
Yakasarudzika Dhizaina yeChina Nyowani 2020 Yakakwirira Hwadhi Drivi ...
Mens Cowsuede Moccasin Slipper Mens Akanzwa Venetian Dr ...
Vatsva Vanosvika Fashoni Inodziya Nguva Yechando Yakasarudzika Yechokwadi Leather Loafers Moccasins Bhutsu Kune Vakadzi
Muenzaniso NO. MakaBLM1291
Ruvara: TAN / NAVY VAMWE
Mwaka: Autumn, Chitubu, Chando
Kukura: Womens Us6-11 #
Vanozivikanwa: B-LAND kana vamwe
Kutakura Pasuru: Carton
Tsanangudzo: COWSUEDE UPPER
Chiteshi: Shanghai / Ningbo
Kurongedza: 1pr / polybag; j-hook / shoebox
Makatoni: 6/12 / 18prs pabhokisi.
Rudzi rwekuvhara: Slip-On
Chokwadi Kune Saizi - Isu takavandudza ino tsvedza ndokugadzirisa saizi nyaya, ndapota sarudza saizi yakajairwa.
Chinyakare Chimiro - Yevakadzi moccasin inotsvedza ine yakasarudzika whipstitch & ng'ombeuede yekumusoro inogadzira imba slippers yakashongedzwa uye chic. Iwo asingaremi maslippers ane akavhara kumashure chitsitsinho rega iwe ufambe nesimba uye zvakatsiga, kunyanya kana uchifamba kumusoro / pasi.
Yekupedzisira Nyaradzo - Yakapetwa neiyo yepamusoro-density ndangariro furo, iyo slippers inogadzira kune tsoka dzako ichigadzira yakanyanya kugadzikana tsika inokodzera. Multi-layer inotsigira sponge uye EVA insole inopa kumisikidza uye kupinza kuvhunduka kuti udzikise kuneta kwemhasuru uye kukuita wakasununguka zvechokwadi.
Nyoro Uye Inodziya - Inodziya furo tsoka ine faux fur lining & cuff yakafukidza tsoka dzako, uchidziya uye wakasununguka, uchizorodza tsoka dzako. Panguva imwecheteyo, inofema inochinja suede dehwe repamusoro inochengeta tsoka dzako dzichitsva uye dzakaoma.
Anochinjika eImba Bhutsu - Neyakagwinya anti-slip rabha mukati mekunze chete, idzi moccasins shangu dzinopfuura dzinongogara dzimba dzekutsvedza. Iwe unogona kutsvedza pane aya loafers zvakasununguka pamba kana kutsika kunze kwemba kuti utarise bhokisi retsamba, kudiridza patsangadzi, kufamba nembwa kana seyaviri yeshangu dzekutyaira pasina kuchinja shangu.
● vakadzi moccasin slippers
● Ndangariro foam foam uye anti-slip TPR chete
● Yekushandisa mukati nekunze
Micheka Kuchengeta Mirayiridzo: Ruoko uye muchina kusuka nemvura inotonhorera; Mhepo yakaoma uye yakaoma fla
● Yakakwira mhando Mombe suede yepamusoro, inogona kugadzirwa mune rakasiyana ruvara.
● Isu takagadzira akasiyana eUpper & lining zvinhu zveichi chimiro.
● Shinda yakakomberedza vamp yakagadzirwa nemaoko. Nedehwe reLeather rakasungwa pavamp.
● Zvimwe Zvigadzirwa mifananidzo ongororo:
Ainge atumirwa & Kubhadhara:
Nguva Yekuenzanisira 7-15days
Lead Nguva 35-45mazuva
FOB Chiteshi SHANGHAI / NINGBO
Kubhadhara T / T, L / C Pakuona,
Chinangwa chedu chekutanga chinofanirwa kunge chiri chekupa vatengi vedu hukama hwakakomba uye hwakavimbika hwebhizinesi, kuendesa kutarisisa kune avo vese kune Cowsuede Slippers Moccasin, Mitengo yese inoenderana nehukuru hweyako yakatarwa; Isu tinopawo inoshamisa OEM mupi kune akawanda akakurumbira zvigadzirwa.
Isu tinoteedzera basa uye chishuwo chezera redu revakuru, uye isu tanga tichishuvira kuvhura tarisiro nyowani mundima iyi, Isu tinoomerera ku "Kuvimbika, Basa, Kuhwina-kuhwina Kubatana", nekuti isu tine backup yakasimba, iri shasha dzakakwikwidzana neyemberi yekugadzira mitsara, yakawanda simba rehunyanzvi, yakajairwa yekuongorora system uye yakanaka yekugadzira kugona.
Pashure: Yakasarudzika Vakadzi Cowsuede Clog Slipper Yakakwira Hwakanaka Nyaradzo Footbed
Zvadaro: Wms Leather Shoes Inodziya Nyaradzo Fuax Fur Slipper
1.Are iwe Trading Kambani kana mugadziri?
A: Isu tiri fekitori uye yekutengesa kambani
2.What wako mukuru musika?
A: Kazhinji Europe neAmerica, kozoti South Africa neSoutheast Asia.
3.Chii chako chikuru chigadzirwa, uye iwe unoita chero chimwe chinhu?
A: Isu takasarudzika mune emukati slippers, moccasins, bhutsu, shangu, uye dzimwe shangu dzevakuru nevana.
Zvemuenzaniso fizi & mitoro, unogona kuzvitumira kune yedu Paypal account.
Zvezvose zvakajairwa, isu tinogamuchira T / T 30% dhipoziti, iyo bhezari inofanira kubhadharwa inopesana nekopi yeB / L.
5.Zvinotora nguva yakareba sei kuita semuenzaniso:
Mazuva 7-10 kana tikakuitira mharidzo nyowani.
Kana iwe ukangosarudza yedu iripo sampuro, tinogona kukutumira iwe kuenzanisira zuva rinotevera.
Mazuva 35-45, zvinoenderana neuwandu uye zvigadzirwa pachazvo.
Tine nyanzvi yekutenga dhipatimendi yekucherechedza musika nguva dzese Kuona kuti tinogona kuwana yakanakisa mutengo wezvinhu.
QC timu pamashifu maviri, ayo aigona kudzora mhando zvakanyanya.
3.Professional Dhizaini Vashandi
Isu tinotungamira pane iyo ODM / OEM dhizaini.Mugadziri wedu anogona kukubatsira kugadzirisa dambudziko rese.Iwe ingotiudza yako dhizaini zano iri zvakanaka.
Kavha & Kutakura:
Pairi rimwechete muPolish imwe, gumi nemaviri / 18/24 mune rimwe bhokisi
Tinogona kupa hangtap, hanger uye bhokisi bhokisi rekurongedza, kana iwe uine chikumbiro chakakosha chingotiudza zvakanaka.
Moccasin yekurara Bhutsu
YeMoccasin Slipper Shangu
New Kusvika Mens Cowsuede Leather Indoor Slippe ...
Vakadzi Microsuede Moccasin Slipper ine Ribhoni Bow
Ruoko Thread Yakakwira Yemhando Cowsuede Venetian Slip ...
Kupisa Kwevatengesi Mens Cowsuede Moccasin Slipper Anti S ...
Vakakurumbira Vakadzi Cowsuede Clog Slipper Yakakwira Hunhu ...
Yakasarudzika Vakadzi Cowsuede Clog Slipper Yakakwira Qualit ...
Kwete, 1299, Dongsheng Avenue, Qingshanhu District, Chang Dong Industrial Zone, Nanchang, JX.China
Online Canton Fair inosimbisa yekumba uye ...
Bangladesh shangu fekitori